Uhlobo olusha lweGo 1.14 selukhona futhi lezi yizindaba zalo | Kusuka kuLinux
Ithimba le-GO lembulelwe ukumenyezelwa kokukhishwa kwe-Go 1.14, inguqulo entsha yolimi lohlelo oluvulekile lomthombo olwenziwe i-Google. Njengoba kwakuthenjisiwe, lokhu kukhishwa akuzange kudlule inyanga kaFebhuwari futhi IGo Team ayizange ibonge bonke labo ababenomusa ngokwanele ukuba banikele ekwakhiweni kwale nguqulo, kungaba ngamazwana ahlinzekelwe le njongo futhi nakulabo ababambe iqhaza esivivinyweni se-beta noma ngokukhipha amakhodi, ukubika izimbungulu nokuthumela imibono.
Kuze kube manje, IGO Team izame ukugcina inselelo eyethulwe nguRob Pike, omunye wabadali abathathu bakaGolang, ngubani Bengifuna lolu limi lwenze izinhlelo ezinkulu zibe lula futhi zisheshe. Njengoba i-syntax kaGo isuselwa kuzinto ezijwayelekile zolimi lwe-C ngamagama okubolekwa ngamanye avela olimini lwePython. Ulimi lufushane ngokwanele, kepha ikhodi ifundeka kalula futhi iyaqondakala.
Ikhodi yokuhamba ihlanganiswa ibe amafayela ahlukile asebenzayo kanambambili ezisebenza ngokwendabuko ngaphandle kokusebenzisa umshini obonakalayo (amaphrofayli, amamojula okulungisa amaphutha, nezinye izinhlelo ezingaphansi zokuxazulula inkinga kuhlanganiswe ngesikhathi sokusebenza njengezinto zesikhathi sokusebenza), ivumela ukusebenza okuqhathaniswa noC.
Iphrojekthi ekuqaleni yathuthukiswa ngohlelo olunemicu eminingi nokusebenza okusebenzayo ezinhlelweni zemixholo eminingi engqondweni, ngisho nokuhlinzeka ngezinga le-opharetha elisetshenzisiwe izindlela zokuhlela ikhompyutha efanayo nokuxhumana phakathi kwezindlela ezifanayo.
Ulimi libuye lunikeze nokuvikelwa okwakhelwe ngaphakathi ezindaweni ezabiwe inkumbulo block echichimayo futhi kunikeza amandla okusebenzisa umqoqi kadoti.
Izici ezintsha eziyinhloko zeGo Go 1.14
Ushintsho olukhulu kule nguqulo entsha luthinta i- new module system in go command yokusetshenziswa kabanzi, inikwa amandla ngokuzenzakalela futhi inconyelwa ukuphathwa kokuxhomekeka esikhundleni se-GOPATH.
Uhlelo olusha lwemodyuli lunokuhambisana kohlobo olakhelwe ngaphakathi, amathuluzi wokulethwa kwephakeji, kanye nohlelo lokuphathwa kokuncika olwenziwe ngcono. Ngosizo lwamamojula, onjiniyela abasabophekile ukuthi basebenze ngaphakathi kwesihlahla se-GOPATH, bangachaza ngokusobala ukuncika okususelwa enguqulweni futhi bakhe imihlangano ephindaphindwayo.
Futhi, imicu ngeke isadingeka ilenga unomphela, njengoba kunjalo ngenhla nge-loop ngaphandle kokubiza umsebenzi, njengoba i-Go Scheduler isebenza ukubheka isikhathi esithile esingahle senziwe senqubo yamanje phakathi nezingcingo zomsebenzi ngaphambi kokuyikhipha entanjeni ukuvula isikhala futhi ivumele ukwenziwa kwemizila emisha. Lokhu kuzoba nomthelela maqondana nokubambezeleka okuphansi kuGo 1.14.
Olunye ushintsho yi-sKungezwe usekelo lokushumeka kokuhlangana nesethi yezindlela ezigqagqene. Izindlela zesixhumi esibonakalayo esakhelwe ngaphakathi manje sezingaba namagama afanayo namasiginesha afanayo nezindlela ku-interface ekhona. Izindlela ezimenyezelwe ngokusobala zihlala zihlukile njengakuqala.
Ngakolunye uhlangothi ukusebenza kwenkulumo ethi "ukuhlehlisa" kwandisiwe, okusetshenziswa kwayo manje akuhlukile neze ngejubane kusuka ocingweni oluqondile kuye emsebenzini wevila, kukuvumela ukuthi usebenzise ukuqala kokuvilapha komsebenzi kwikhodi ezwela ukusebenza.
Okuncamelayo kokukhetha okungafani nakho kuyanikezwa- Amaluphu angaqukethe izingcingo zomsebenzi manje angaholela ekuvinjelweni kwesimiso noma ukubambezeleka ekuqaleni kokuqoqwa kukadoti.
Ukusebenza kahle kohlelo lokwabiwa kwekhasi lememori kuthuthukisiwe, manje esinezingxabano ezimbalwa zokukhiya kuzilungiselelo ezinamanani amakhulu we-GOMAXPROCS.
Ngenxa yalokhu, ukubambezeleka kwehlisiwe futhi ukusebenza kwanda ngokwabiwa okunamandla ngokulinganayo kwamabhulokhi amakhulu ememori.
Angiphinde ungathola uhlu oluphelele lwalezi zici ezintsha ukhiye kumanothi wokukhishwa we-GO 1.14.
Futhi, le nguqulo entsha izosebenza kuma-macOS 10.11 El Capitan futhi isazosekela ama-binaries angama-32 kule nkundla. Le kungaba yinguqulo yakamuva futhi esekela ama-binaries angama-32-bit kwamanye amapulatifomu afana ne-watchOS, i-iOS, i-iPadOS, ne-tvOS.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Uhlobo olusha lweGo 1.14 selukhona futhi lezi yizindaba zalo
Isisekelo Sengqalasizinda Eyisisekelo: Indlela Yokuqinisa Umthombo Ovulekile